Mastiff: Ziva hunhu uye hanya nerudzi urwu | Imbwa Nyika
Lourdes Sarmiento | | Imbwa dzinobereka
Rudzi urwu runofungidzirwa kunge rwakasiyana nehusimbe uye nerudo kukwiridzira kune varidzi varo, kuve rakanakisa sembwa yekurinda, saka zviri yaichengeterwa masitendi makuru. Kubatsira kwayo kunobva pakuti inokurudzirwa zvikuru sembwa yekambani nekuda kwehunhu hwayo.
Mumazana emakore, mastiff aperekedza mapoka emakwai kudzivirira mombe pakurwiswa nemhumhi. Iwe unofarira here rudzi urwu? Wobva waramba uchiverenga chinyorwa ichi kuti uzive nezve zvakakosha zvakanyanya zvine chekuita nenyaya iyi.
Sezvatagara tataura, basa rayo rinongo chengetedza. Iyo inozivikanwa zvakare nemamwe mazita zvichienderana nenzvimbo yenzvimbo kwayiri, imwe yacho imbwa yemombe.
Zvinonakidza kuti iwe unoziva chimwe chinhu nezvenhoroondo yerudzi rwunokudzwa uye ndizvozvo muna 1981 Sangano reSpain re Spanish Mastiff imbwa.
Sangano iri raive nepfungwa yekuronga a chirongwa chekutora ruzivo nezve rudzi urwu munguva dzekare. Ndokusaka akagadzira purani nyowani nechinangwa chekuwanazve ruzivo rwese rwuchitaura nezve imbwa dzekare dzemombe.
Ivo vane hunhu hunovatsanangudza uye nekuvapa kuzivikanwa, ndiko kuti, izvo Idzo mhando dzinogona kushandiswa kune zvese zvipfuyo uye imbwa dzinorinda. A.
Tichapfupisa pazasi pehumwe hunhu uye hunhu hunoita kuti ive inokwezva chaizvo:
Inoonekwa nekuve imbwa hombe, yakasimba chaizvo, ine simba rakanyanya uye nemhasuru zhinji. Izvo zvinotaurwa nezve izvi izvo Ndiyo mhando yakakura kwazvo inoonekwa muSpain.
Rudzi rusina kuvimbika, rwekusimba kukuru pamberi pevasingazive uye chokwadi chaizvo nezvake. Mvere dzayo dzakakora uye dzine mhando yemvere dzemvere dzinopa chitarisiko chehangu yepasi, iyo yainorasikirwa muzhizha.
Kana iri vara ravo, chena, dema uye brindle izvo zvakajairika. Kureba kwavo kunosvika masendimita makumi masere nemakumi masere zvichienderana nekuti varume here kana kuti vanhukadzi. Kurema kwacho kuri pakati pe40 ne70 kilos kunyangwe ivo vachigona kusvika 90 kg.
Ivo anowanzo shandiswa kuchengeta zvipfuyo pamwe nemapurazi uye zvivakwa. Senguva dzose, zvakaenzana, iyo inovaratidza sembwa shamwari dzakanaka. Ivhareji yeutarisiro hwehupenyu huri pakati pemakore masere negumi uye nezve nharaunda zvinogona kutaurwa kuti zvinokwana chaizvo mumhuri, munharaunda yekumaruwa, kufudza uye / kana kuongorora.
Zvinogona kutaurwa nezvake kuti iye ndomumwe wemhando huru kwazvo dzine Spain. Pane kusahadzika nezve kwayakatangira uye kutanga, asi kune nhoroondo nhoroondo iri padyo neichoicho; akauya munyika kubudikidza nevaFenikiya nevaCelt uye dzaishandiswa nevaRoma sembwa dzinorwa.
Izvo pasina panikiro ndezvekuti muMiddle Ages yavo kukosha kwaive kwakanangidzirwa sevachengeti vemombe. Kazhinji, hunhu hwayo ndehwe a dzinobereka zvakanyanya kusimba, dzakasimba, uye dzinokwanisa kudzivirira mapoka kubva kune dzimwe mhuka kana iwe uchinzwa kutyisidzirwa.
Imbwa yeSpanish Mastiff yakasimba, hombe uye yakasangana. Makumbo acho anonamira, anorema uye akasimba. Iine musoro wakakura kwazvo, nzeve dzakakombama uye ganda rechiso charo rakarembera pamusoro pemaziso nematama.
Muviri wese wakafukidzwa nebvudzi rakakora kwazvo. Kana iri kara, akanyanya kufanana ndeayo mavara akasimba uye brindle.
Kugadziriswa kwayo kuri nyore uye kunoda kurovedza muviri kwakawanda, saka zvinokurudzirwa kugara mumba hombe. Usaregeredze kushushikana kwake nekuda kwekushaikwa kwekurovedza muviri.
Brushing inokurudzirwa kubvisa zvese zvisaririra zvevhu nevhudzi rakafa. Tarisa mushure mekubuda kwega kwega kune fleas nezvikwekwe uye paunomugeza chengeta nzeve dzake.
Kuve irudzi rwehukuru hwakasimba, inotarisa kune zvirwere zvakaita sehudyu dysplasia. Iwe unofanirwa kudya kudya kwakaringana, ine mishonga yakakosha yekugaya zvakanaka; vanochengeta majekiseni avo uye kuti vanopinda kuna chiremba nguva dzose
Iwe unofanirwa zvakare kuidonhedza kusvika padanho rinokurudzirwa nenyanzvi. Iwo maparasita anodya pane chimwe chikamu chemuviri wako, zvichikonzera kukuvara kwakananga uko kunogona kukonzera manyoka, kuonda, kurutsa uye kunyangwe ura hwemukati hunogona kumiswa.
Iwe chete unofanirwa kufunga nezve chaiyo uye deworm yakakwana nemishonga yakanyatsogadzirirwa zvipfuyo.
Rudzi urwu runoda imwe yakakwira caloriki kudya nekuda kwehukuru hwayo, pamwe nekurovedza muviri kunoenderana nehunhu hwayo hwakasimba, saka kuchengetedza kwayo chinhu chakakosha uye zvese zvinokurudzirwa zvinofanirwa kuteverwa.
Zvichienderana nekuti ichiri mbwanana here, zvinokurudzirwa kuti kudya kwayo kuve kwe zvidimbu zvidiki uye panguva dzakasiyana kanokwana katatu pazuva, uye kwete kana mhuka ichida, kumujairira kuranga mukudya kwake.
Saizvozvo uye mukati memazano zvakanaka kuti iwe unodya antioxidantssezvo iwo akakosha kuti achengete jasi racho riine hutano hwakanaka. Nenzira imwecheteyo, mupe iye ese mapuroteni uye chikafu chinodzivirira majoini ake.
Sezvo ivo vane dambudziko rekufutisa, iwe unofanirwa kutarisa huremu hwavo uye chero kumwe kusaenzana kwekudya. Uyezve tarisa kubvunzana kwako nehunyanzvi, iye achakupa rairo iri nani pane mafambiro ari kuita Mastiff.
Usafunge nezve kuirovedza kana kundoitora uchifamba mushure mekudya, zvinokurudzirwa kumirira maawa chaiwo kuitira kuti igadzire zvakanaka, nekuti kana ikasadaro inogona kukonzera matambudziko.
Iwe unofanirwa kumutora kuenda naye kunofamba kanenge kakati wandei pazuva, ndeye hutano hwako uye hutano hwepanyama. Ini ndinogona kukuvimbisa kuti neizvi iwe unodzora huremu uye kugaya kwakanaka kwembwa yako.
Muchengetedze kubva kumahutachiona, simbisa chirongwa chekudzivirira nachiremba wemhuka. Rudzi urwu runoda kutariswa kwakawanda, kunzwa wega kana kusapihwa rudo kunogona kukonzera kuti iite zvisina kunaka uye inotungamira kumatambudziko epfungwa.
Imwe yematambudziko ehutano yakaratidzwa mumagazini ino ndeye hudyu dysplasia, izvo zvinogona kukukonzeresa kurwadziwa uye ungatokamhina. Iwe unotoziva kuti iwe unogona kuzvideredza nekurovedza muviri, mitambo, chikafu uye kufamba.
Chenjerera matambudziko ekumonyoroka mudumbu. Kana iwe ukave nehanya kuti iko kudya kwekudya kuri muzvikamu zvidiki kakawanda pazuva, iwe unozochengetedza hutano hwavo uye hupenyu hwakanaka mukutarisa.
Spanish Mastiff saka Iyo imbwa hombe, yakasimba, yakatendeka kuna tenzi wayo uye anoda vana kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Mastiff
Chirungu nzombe terrier